The Ab Presents Nepal » ७० करोडको बाटो भत्कियो झरिले !
७० करोडको बाटो भत्कियो झरिले !
गोरखा-: हालै कालोपत्रे गरिएको लुइँटेलभञ्ज्याङ भच्चेक सडकको पहिलो खण्डको बिभिन्न ठाउँमा सडक भत्किएको छ । पानी पर्न थालेपछि सडक भत्किन र ग्याभिन पर्खाल पल्टिन थालेको स्थानीयबासीले गुनासो गरेका छन् ।
केहीदिनदेखिको बर्षाले सिरानचोक गाउँपालिका ४ को चिउरीबोट भन्ने ठाउँमा कालोपत्रे गरिएको सडक भत्किएको स्थानीय रमित ढकालले जानकारी दिए ।केहीदिनअघिदेखि चिरिएको थियो, हिजो भास्सियो,उनले भने करिब सात मिटर जति भास्सिएको छ । उनका अनुसार सिरानचोक गाउँपालिका ३ हर्मी भञ्ज्याङनेर राखिएको तारजालीको पर्खाल पनि पल्टिएको छ । छ वटा ग्याभिन भरेको थियो ।
सडकबाट बगेको बर्खे भेलले चारवटा ग्याभिन पल्टाइदिएको छ । एउटा त बगाएर तल खोलासम्म पु¥याएको छ ।ठेकेदारले कच्ची संरचना बनाएकाले सामान्य बर्षामा पनि पहिरिने, पल्टाउने भएको उनले बताए ।जग बलियो गरेर बनाएको भए यस्तो हुने थिएन । चाँडो काम सक्ने उद्देश्यले हतार ग¥यो । कच्ची बन्यो उनले भने ।
सडक भत्किएको बारे कार्यालयलाई जानकारी भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार एकाइ(जिमाली)का प्रमुख रामशरण आचार्यले बताए । सो सडक निर्माण कम्पनीलाई भत्किएको खण्ड मर्मतका लागि आग्रह गरिसकिएको उनले बताए ।
‘भूकम्पीय आपतकालीन सहायता परियोजनाले सो सडक कालोपत्रे गरेको हो । ‘एशियाली विकास वैंकको ७० करोड रुपैंया सहयोग र स्वीस सरकारको प्राविधिक सहयोगमा लुइँटेलभञ्ज्याङदेखि तार्केडाँडासम्म पहिलो प्याकेजको १८.५ किलोमिटर सडक लामा अमर जेभी कन्स्ट्रक्शनले र दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत तार्केडाँडादेखि नयाँगाउँसम्मको १३ किलोमिटर सडक लामा कन्स्ट्रक्शनले एक महिनाअघि निर्माण सम्पन्न गरेका थिए’ ।